လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဒေါသစိတ်ဖြင့် ပြောဆိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမပြုဟု နိုင်ငံတော်? - Yangon Media Group
လူမှုကွန်ရက်ပေါ်တွင် ဒေါသစိတ်ဖြင့် ပြောဆိုနေခြင်းသည် နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမပြုဟု နိုင်ငံတော်?
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁
လူမှုကွန်ရက် ပေါ်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မုန်တီးစိတ်၊ ဒေါသစိတ်ဖြင့် ပြောဆိုနေခြင်းများသည် နိုင်ငံအတွက်အကျိုး မပြုကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဧပြီ ၁ ရက်၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကျောင်းကုန်းမြို့တွင်ကျင်းပသည့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူမှုကွန်ရက်တွင် ပြောဆိုနေ ကြသည့် အသံများမှာလည်း ပြည်သူအများစု၏ အသံမဟုတ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”အခုဆိုလို့ရှိရင် Social Media ပေါ့နော်။ Facebook တို့ ဘာတို့မှာ တက်နေတဲ့အသံတွေ ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အသံလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူအများစုရဲ့ အသံတောင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကိန်းဂဏန်းနဲ့ တွက်ကြည့်ရင်တောင်မှ ပြည်သူအများစုရဲ့ အသံမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာပါတယ်။ Social Media နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကြုံတုန်း ကျွန်မပြောချင်တာက Social Media မှာ ဒီ Facebook တွေဘာ တွေမှာ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဒေါသတွေအင်မတန်မှများလာတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မလိုလားတဲ့စိတ်တွေ၊ မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေ၊ ဒေါသစိတ်တွေ၊ ဝေဖန်ချင်တဲ့စိတ်တွေ၊ အဲဒါ တွေက ကျွန်မတို့နိုင်ငံအတွက် အကျိုးပြုတာမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါင်း လက္ခဏာ မဆောင်ပါဘူး။ ဝေဖန်တာက သင့်တာကိုတော့ ဝေဖန်ရ မယ်။ ဝေဖန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် နည်းလမ်းလေးတစ်ချက် ကျွန်မဖြည့်ပေးပါ မယ်။ အလုပ်တစ်ခုကိုမလုပ်ခင် ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရဲရဲတင်းတင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးနိုင်တဲ့ သတ္တိရှိရမယ်။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးတာလဲ။ သက်သက် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ရေးတာလား။ တကယ်ပဲ ကောင်းကျိုးဆောင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ရေးတာလား။ အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာ အရေးကြီး ဆုံးက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မလှည့်ဖြားဖို့ပါပဲ။ လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်အကောင်းထင်ကြတယ်။ အဆိုးမထင်ကြဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိမိ၏အမြင်၊ ယူဆချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြပိုင်ခွင့်ပေးထားပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ ပြောဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တိုက်ခိုက်ရန်မဟုတ် ကြောင်း ၎င်းကသတိပေးသည်။ ”ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းကို သိပ်မြင်ပြီးတော့ သူများရဲ့အကောင်းကို ကျုံ့ပြီးမြင်တာဟာ သူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဓာတ်မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ပြည်သူကိုပေးထားသည့် ကတိများတည်ရန်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဆု
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းပေးရန် မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပြီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရေး နိုင?
ပုဂံဒေသ လူနေရပ်များတွင် ‘စည်ပင်ဥပဒေ’၊ ရှေးဟောင်းဇုန်များတွင် ‘ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာ?
ချဲလ်ဆီးတွင် ဆက်ရှိရန် မသေချာကြောင်း ဟာဇက်ပြောဆို၊ နာပိုလီတွင် လက်တွဲခဲ့သော ဂျော်ဂျင်ဟို??
ကာဗာဂျယ်၏ အဝါကတ်အတွက် ယူအီးအက်ဖ်အေ စစ်ဆေးမည်
‘အမည်ပေါက်နှင့် ကျူး’ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးမှ သရုပ်ဆောင်များ၏ အမှတ်တရ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြုလ?
သမီးကလေးကို ပြန်ပေးဆွဲမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသော ကိုင်လီဂျင်နာ
”အနုပညာလောကမှာ Group ဖြစ်နေတာတွေက အဆင်မပြေပါဘူး” ဖူးပွင့်သခင်
မန္တလေး မိုးလေဝသ ရေဒါစခန်းမှ မိုးလေဝသ သတင်း တစ်နေ့ ငါးကြိမ် ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိ
အောင်လံမြို့၌ မန်ကျည်းသီး ဈေးကောင်းနေသောကြောင့် မန်ကျည်းသီး ကောက်သူများနေ
ပုဂံဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင်ပြီ